🥇 ▷ Microsoft waxay soo bandhigaysaa aaladaha ay ku keento DirectX 12 Windows 7 ✅
Microsoft waxay soo bandhigaysaa aaladaha ay ku keento DirectX 12 Windows 7
Mid ka mid ah horumarada ugu waaweyn ee Microsoft ku sameysay sannadihii u dambeeyay heerka maktabadda, ayaa ah Hirgelinta DirectX 12 ee Windows 10. API-gu waa waxa u saamaxaya horumarka ay fulinayaan daraasadaha in loo fasiro qalabka, sidoo kalena soo bandhigaya koox wanaagsan oo qalab ah si ay ugaga faa’iidaystaan ​​matoorrada garaafyada ee ah nafta cayaaraha. Xitaa hadda, DirectX 12 waa dhiirrigeliyaha ugu weyn ee Ray Tracing, oo ay ku jiraan xirmada aaladdiisa Tooska Tooska ah, taas oo Nvidia ku bixin karto khibrado la yaab leh. Hadda, adeegsadayaasha dhammaantood maahan Windows 10 sidaas darteed, Microsoft waxay gacan ka geysaneysaa soo-saareyaasha inay keenaan DirectX 12 Windows 7.
Qaab ahaan, danaha Microsoft ee ku saabsan in la daboolo kuwa iswaafajiya waxay u baahan tahay nooc kasta oo caawimaad ah si tirada ugu badan ee isticmaaleyaashu u heli karaan cayaarahooda. Ka fikir magacyadaas soo mari doona Steam, tusaale ahaan, taas oo ka mid ah shuruudaha lagu qasbay inay lahaato Windows 10. Waxay u muuqan kartaa shuruudo macquul ah marka loo eego duruufaha jira, laakiin maahan adeegsadayaal badan oo ku sii jira Windows 7, sababta oo ah way ku filan tahay inta badan ciyaaraha lagu bixiyo dukaamada kala duwan ee dijitaalka ah. Xaqiiqdii, warku wuxuu ka soo baxay shaqada wadajirka ah ee loo qabtay Microsoft iyo Blizzard inay soo bandhigaan ciyaarta ugu horreysa ee Windows 7 ee la jaan qaada DirectX12, World of Warcraft.
MMORPG-ga Blizzard wuxuu jiray 15 sano Suuqa gudaheeda oo sii wadata socodkiisa mid ka mid ah bulshooyinka ugu tirada badan uguna heellan. Sida iska cad, ciyaartan looma horumarin si loogu isticmaalo DirectX 12 oo hada, mahadsanid Microsoft waxay soo bandhigtay aaladaha lagama maarmaanka u ah inay keento DirectX 12 ciyaar Windows 7, waxay bixisaa taageeradaas si looga faa’ideysto maktabadahaan. Sida laga soo xigtay wccftech, hadda isticmaaleyaasha World Warcraft waxay dareemi doonaan horumar weyn oo ka soo baxa waxqabadka ciyaarta iyada oo loo mahadcelinayo hirgelinta DirectX 12. Qoraal ka soo baxay Microsoft waxay xaqiijineysaa in ay ahayd go’aan muhiim ah in lagu caddeeyo faa’iidooyinka caalamiga ah ee ay bixiso DirectX 12 Maktabadaha, oo ka dhig kuwo ay ku habboonaan karaan cayaaraha ka hooseeya nidaamka hawlgalka ee Microsoft.
“Microsoft, waxaan dadaal ugu jirnaa sidii aan uga jawaab celin lahayn jawaab-celinta macaamiisha, marka marka aan faallooyinkaas ka helno Blizzard iyo kuwa kale ee horumariya, waxaan go’aansanay inaan u dhaqan-galno sida ugu habboon,” inkasta oo horumaradaani aysan la mid aheyn haddii ciyaarta lagu dilo Windows 10. Sida ay yiraahdaan Microsoft, waxaa jira dhowr hanaan oo loogu wanaajinayo nidaamka hawlgalka inuu xitaa dhaqso u shaqeeyo, sidaa darteed, in kasta oo horumarintu ay muuqato , maahan wax maktabadahaan oo dhami ay soo bandhigi karaan. Laakiin uma malayn kartid in dhaqdhaqaaqani uu ugu wacan yahay adeegsadayaasha Dunida Dagaal, waa inaan ku fikirnaa in Microsoft ay xiiseyneyso mid ka mid ah sii deynta soo socota, Gears 5.
Wax walba ayaa tilmaamaya cusboonaysiintaan oo u oggolaaneysa dadka isticmaala inay Windows 7 wuxuu ku ciyaari karaa ciyaaraha hoos yimaada DirectX 12 Waa cawaaqib xumo imaatinka Gears 5 ee Steam, halkaas oo aad ka arki karto in ciyaartu ay la jaan qaadi karto nidaamka hawlgalka. Waa wax xiiso leh in ciyaartu ay gaarto tirada ugu badan ee suurogal ah ee ciyaartoy hadana in kasta oo ilaa iyo hadda nidaamka qalliinka loo istcimaalay shuruud ahaan, xallinta isku-dheelitirnaan la’aantaan macnaheedu waa gelitaanka weyn ee badeecadda. Xaqiiqdii, waan arki karnaa taas si loo gaaro waxqabadka lagu taliyay. waxay u baahan tahay Windows 10.
Laakiin ku soo noqoshada warka, iyada oo la tixgalinayo waxa Microsoft ay raadineyso soosaarayaasha, taageeradeeda si ay ugu oggolaato daraasadaha cadee horumarkooda oo geyso DirectX 12 Waa wax xiiso leh. Microsoft waxay isku dayeysaa inay ka dhigto bulshada horumarinteeda mid waligeed sii ballaaraneysa, tanna, waxay soo bandhigtay aalado horumarin ah si ay ugu hormariyaan cayaaraha Windows 7 iyadoo la adeegsanayo DirectX 12, taas oo ah tallaabo kale oo loo soo qaado nidaamka ‘Xbox’ dhammaan horumariyeyaasha